अर्थ मन्त्रीज्यु किन्दा पैसा विदेशिने भए बिजुली गाडी देशमै बनाउँ -महाबिर पुन
काठमाडाैं । नेपाल आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष तथा विद्वान महावीर पुनले सरकारले आगामी वर्षकाे बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लगाएकाे भन्सार तथा अन्तशुल्ककाे विराेध गरेका छन् । सरकारले अध्ययन नगरी र अनुमानका भरमा विद्युतीय सवारीमा कर लगाएकाे आराेप छ ।
उनले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा प्रतिक्रिया दिँदै यस्ता सवारी किन्दा कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा समेत सुझाएका छन् ।
१. बिजुली गाडीको कर कम गर्दा धेरै गाडी आयात भएर मुद्रा बाहिर जाने डर भएकोले कर बढाएको भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नु भएछ । विदेशबाट बिजुली गाडी ल्याउँदा घाटा हुने भए सकेसम्म बिजुली गाडीहरु नेपालमै बनाउँ न त मन्त्रीज्यू । अहिलेलाई हवाईजाहज, रकेट र ठूला-ठुला चिज बनाउन नसके पनि बिजुलीले चल्ने र राम्रोसँग काम दिने बिजुली गाडीहरू नेपालमै बनाउन पक्कै सकिन्छ ।
सरकारको उचित नीति नियम सहित हुकुममात्र होस् त दुई-तीन वर्षभित्र त्यस्ता बिजुली गाडी बनाउने कम्पनहरू नेपालमा धेरै नै खुल्नेछन । सरकारले यो कुरा लेखेरै राखे हुन्छ ।
Prevकेटी मान्छे निहुँरिदा उनको के देखिन्छ ? ज्योति मगरको यस्तो जवाफ भिडियो सहित
Nextसशस्त्रले तोडयो भारतीय एसएसबीको दादागिरी आफ्नो जमिनमा नेपालीले खेति थाले